Mamiriro ekunze uye allergies: hunhu, zviratidzo uye meteorological misiyano | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 08/04/2021 11:27 | Mamiriro ekunze
Immune system yemunhu anogona kutadza kumera vanhu uye pane dzimwe nhambo uye kugadzira allergies. Chinhu chakasarudzika ndechekuti allergies inokonzeresa uye inosemesa kuhotsira, kuzara kwemhino uye kugara uchimhanya mhino, pakati peimwe mhedzisiro. Iyo mamiriro ekunze uye allergies ivo vane hukama muvanhu vazhinji. Uye kune vanhu vane allergies kune shanduko mumamiriro ekunze.
Naizvozvo, isu tiri kuzotsaurira ichi chinyorwa kukuudza iwe zvese zvaunoda kuti uzive nezve zvakajairika kuita kune mamiriro ekunze uye allergies.
1 Mamiriro ekunze uye allergies
2 Zvinokonzera ekunze uye chisimbwa
3 Inoenderana meteorological misiyano
4 Mhepo inoshanda
Mune irwo rudzi rwevanhu, akanyanya kugadzikana neanowanzoitika rhinitis, allergic conjunctivitis uye zvimwe zviratidzo zvakaita sedermatitis kana mamwe mamiriro akatonyanya kuoma. Kana tichitaura nezve rhinitis, tinoreva kuenderera mberi nekuhwihwidza kunowanzotibata patinonyatsoburitswa, kuzara kwemhino kusingatibvumidze kufema zvakanaka uye kugara tichidonha mumhino. Rhinitis ndeimwe yeasina kufadza zviratidzo zvekupfuura allergy. Zviratidzo zvinoshungurudza zvekuti, dzimwe nguva, hazvitibvumidze kurarama hupenyu hwakajairika. Kugara uchibika, uchihotsira uye kuridza mhino dzako hazvifadzi zvachose.
Chimwe chiratidzo chemamiriro ekunze uye allergies ndeye conjunctivitis. Ivo vanowanzo kuve nezviratidzo sekuwasha uye nekutsamwa maziso. Kune vanhu vane maziso anotendeuka rakadzika tsvuku. Mune dermatitis, eczema paganda uye mikoko inogona kukonzerwa. Chekupedzisira, mamwe emamiriro ekunze uye allergies anogona kuve akakomba uye kurwisa kugaya uye kufema masisitimu senge bronchial asima.
Zvinokonzera ekunze uye chisimbwa
Kuve neanopokana nekuchinja mumamiriro ekunze kunouya kubva kune genetine mutoro uye nharaunda yakatikomberedza. Isu tese tine maitiro ekuti titambure kana kuti kwete kubva ku allergies kune akasiyana marudzi eanosiira. Zvimwe zvipenyu zvinogona kusanganiswa nenzira inoita kuti immune system yedu ikwane inogadzira kuwedzeredza uye kupindura kwakashata kune zvimwe zvinokanganisa kana zvinhu ayo anonzi ma allergener. Kana murwere akafumurwa kune vamiririri ava, vari muchimiro chehypersensitivity kune akateedzana maseru uye biochemical phenomena izvo zvinogadzira maitiro nenzira dzakasiyana zvinoenderana nemunhu wega wega.
Zviratidzo zvakajairika ndezvi zvataurwa pamusoro, asi kukura kwavo uye kuwanda kwavo kunoenderana nemhando yega yega yemunhu uye mwero wekuratidzwa kune allergen. Allergen ndiwo maimiriri anokonzeresa kurwara. Izvi zvinogona kuva: chikafu, mishonga, mweya unofefetera senge mukume, makemikari, fungi, chakuvhuvhu, mite uye mhuka dander, nezvimwe. Kana maallergen akasangana nezvinhu zvipenyu, immune system inozviona sezvinhu zvine njodzi uye inozvidzivirira nekurwisa, inova mhinduro yezvakaratidzika kunge zvatanyora pamusoro.
Mhepo inoona nezvekuparadzira mukume wezvirimwa kuti uwedzere nzvimbo yekuparadzirwa kwemiti. Ndokusaka shanduko mumamiriro ekunze inogona kukonzeresa kurwara. Uye ndezvekuti patinochinja mwaka, ndozvinoitawo mhepo, kusimba kwadzo uye negwara uyezve izvo zvinomera zvinotanga nhanho. Iyi ndiyo nhanho yemaruva umo ivo vanogadzira mukume kuti vakwanise kupararira munharaunda.
Inoenderana meteorological misiyano
Zvino zvatave kuziva kuti ma allergener ndiwo anokonzeresa kuti isu tiite zviratidzo zvekurwiswa, ngatione kuti mamiriro ekunze uye allergiki zvinei nazvo. Tinofanira kunzwisisa kuti allergy yekuchinja kwemamiriro ekunze pachayo haipo. Hazvireve kuti isu tichave nekuvandudza zviratidzo kusati kwachinja kwemamwe mamiriro ekunze anoratidza nharaunda kana nharaunda yemunhu mune imwe nguva yenguva. Izvi hazvisi izvo zvega allergen. Pane dzakawanda nguva, shanduko yemamiriro ekunze ndiyo inokonzeresa kuwanda kwehuwandu hwevamwe varikugadzikana mumhepo, zvinova zvinobatsira mukuita kweiyo mucosa mune vanorwara.
Tichaongorora kuti ndeapi mamiriro ekunze emamiriro ekunze anoenderana zvakanyanya nezviratidzo izvi. Pakarepo shanduko mumhepo tembiricha uye hunyoro zvinowanzo gadzira zvimwe zviratidzo mune vanorwara. Uye izvi imhaka yekuti mucosa inoitirana nemamiriro aya. Shanduko mumhepo tembiricha uye mwando zvinogona kukonzera kuzvimba. Kune rimwe divi, tembiricha yakaderera inogadzira shanduko mumhino uye bronchial sarudzo. Izvi zvinoreva kuti iyo yega ivo vachabatira madziro avo uye vachaderedza nzira dzekudzivirira zvakasikwa nemhepo. Shanduko idzi dzinokonzera kufema kwehutachiona hutachiona.
Kana tikaenda neimwe nzira, isu tinoona kuti chitubu chiri kuwedzera kutarisira kusvika kwayo, nekuti kune zvimwe zvidzidzo zvinosimbisa kuti zvimwe Miti inodonha muSpain inokura mazuva makumi maviri apfuura makore makumi mashanu apfuura. Shanduko iyi inoshandura kukura kwezvirimwa neyakareba nguva yekufambisa. Ramba uchifunga kuti kana izvi zvikaenderera, vanhu vazhinji vanokonzeresa mukume vanozosangana nedambudziko iri kwenguva yakareba gore rega.
Iyo iyo nguva iri imwe yeakakosha mamiriro emamiriro ekunze emamiriro ekufunga. Iri mukutarisira kwekusimudzira fungal spores uye mukume kuburikidza nemhepo. Pamazuva kana paine mhepo yakawandisa yemuchirimo, hazvikurudzirwe kuenda kunze kune vese avo vane allergies. Kupararira uye kuwanda kwema allergen kunoenderana nemusanganiswa unogadzirwa nemhepo. Zvichienderana nekutungamira kwaro uye nekumhanya, yakamiswa nhare inoverengwa inogona kuitwa uye mhando yemweya yakadzidzwa kuti itange fungidziro dzekuzivisa kuti vabatsire vanorwara nehurwere.
Kutenda izvo, Nhasi tine data rinoratidza huwandu hwemukume mumhepo uripo zuva nezuva kuziva kana tichifanira kuenda kunze sekuchengetedza kana zvirinani kugara pamba kuti tidzivise maitiro ari mucosa.
Mamiriro ekunze uye allergies zvakare zvine chekuita nazvo huwandu hwunyoro, mvura uye chando munzvimbo. Uye ndeyekuti aya maitiro emamiriro ekunze anokonzera kusefa kana kunatsa kwenzvimbo. Izvi zvinoreva kuti mbeu dzemukume dzinotorwa nemadonhwe emvura uye, achirema, anowira pasi ndokuramba akaiswa. Zvakajairika kucherechedza kuti vanorwara nehutachiona mumatsutso vanoita kuti zviratidzo zvavo zvinyanye pamazuva ezuva uye nemhepo, ivo vachivandudza pamazuva ekunaya.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezvehukama pakati pemamiriro ekunze uye chisimbwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Mamiriro ekunze » Mamiriro ekunze uye allergies